नेपाल आज | पुर्पक्षका लागि मात्र जेल परेका व्यक्ति भन्छन्– जवानीमा जेल हाल्यो बूढो भएपछि छाड्यो (भिडियो सहित)
भिडियो मेरो परिवार मेरो कथा समाज
पुर्पक्षका लागि मात्र जेल परेका व्यक्ति भन्छन्– जवानीमा जेल हाल्यो बूढो भएपछि छाड्यो (भिडियो सहित)
सोमबार, ११ मङि्सर २०७४ गते प्रकाशित
काठमाडाैं । कुनै कसुरविना पुर्पक्षको लागि भन्दै सात वर्ष जेल बसेको मान्छेको मनमा के कुरा खेल्दो हो ! परिवारको पीडा कस्तो हुँदो हो ! उनलाई अदालतले सरकारको एउटा प्रतिवेदनको आधारमा सात वर्षसम्म जेलमा राखेको थियो ।
उनले ललितपुरको नख्खु जेलमा परेपछि उनकी जीवन संगीनी दीपा गौतमले पछिल्लो डेढ वर्षदेखि निरन्तर धर्ना दिइन् । अन्ततः पाटन उच्च अदालतको फैसलाले उनलाई बेकसुर सावित गरिदियो । उनी रिहा भए ।
सुरुमा एउटा कम्पनीको आठौँ सञ्चालक भनेर प्रतिवेदन बनाई सरकारले ठगीको आरोप लगाएको थियो । सात वर्षपछि उनी कम्पनीको सञ्चालक नभई सामान्य कर्मचारीमात्र भएको ठहर भयो । उनी रिहा भए तर जेलमा बितेको सात वर्ष फर्किएन । उनको पीडा कम भएन । यो तिनै निर्दोष बन्दी विश्वनाथ गौतमको कथा हो ।
विश्वनाथ गौतम जेल जानुअघि नेपालमा पिरामिड शैलीको सञ्जाल व्यापारमा लोकप्रिय बनेको युनिटी लाइफ नामक कम्पनीमा निर्देशकको पदमा कार्यरत थिए । युनिटीले उनलाई राम्रो तलब सुविधा दिएको थियो । बढ्दो लोकप्रियतासँगै कम्पनी सरकारले ठगी धन्दामा संलग्न भएको आरोपमा बन्द गराइदियो । देशभरीबाट युनिटीका सञ्चालकसहित अन्य जिम्मेवार कर्मचारीहरूको धरपकड भयो । त्यसमा मुछिए विश्वनाथ गौतम पनि । कम्पनीका पैसावाल केही सञ्चालकहरू अदालतलाई मोटो रकम बुझाएर धरौटीमा रिहा भए । धरौटी बुझाउन नसकेका विश्वनाथले चाहिँ अदालतको फैसला कुर्दै सात वर्ष कारागारमा बन्दी जीवन बिताउनु पयो ।
उनी जेल गएपछि चार जना छोराछोरीको लालनपालन र शिक्षादीक्षाको जिम्मेवारी उनकी श्रीमती दीपा गौतमलाई एक्लै आइप-यो । हुर्कंदै गरेका छोराछोरीलाई बाबु हुँदा हुँदै टुहुरो जस्ता भए तर दीपाले हरेश खाइनन् । भाग्यलाई धिक्कारिनन् । उनले अनेक सास्ती बेहोर्दै छोराछोरीको जिम्मेवारी लिइन् र नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनअगाडि आफ्नो पतिको रिहाइको माग गर्दै धर्ना गरिरहिन् । एक दिन त अदालतले विश्वनाथ गौतमको कसुर छैन भन्ने अवश्य सुन्ला भन्ने विश्वास उनले गरिन् ।
आफ्नो हट्टाकट्टा, गरीखाने जागिरे श्रीमान् सात वर्ष कुनै कसुरविना जेल परेर निस्कँदा दीपाको मन कुँडिएको छ । विश्वनाथ ‘दारीवाल बूढो’ जस्ता भएका छन् । विश्वनाथले जेलको कालो कोठरीबाट मुक्ति त पाए तर गौतम दम्पतीको धर्ना सकिएको छैन ।
त्यही आन्दोलनलाई पूर्णता दिन ‘देउतालाई दण्ड’ शीर्षकमा एउटा पुस्तक पनि सार्वजनिक गरेका छन् । दीपाको नजरमा उनका श्रीमान् देउता हुन् । त्यसैले पुस्तकको नाम ‘देउतालाई दण्ड’ राखियो । दीपाले हामीसँगको कुराकानीमा आफ्नो वेदना पोखिन् । यस पुस्तकमा दीपाले आफ्नो सुखी परिवार राज्यको षड्यन्त्रमा परेर बर्बाद भएको घटनाको नालीबेली पेश गरेकी छन् ।
विश्वनाथले जेलबाट मुक्ति त पाए तर गौतम दम्पती अब क्षतिपूर्ति पाउन आन्दोलनमा छन् । विश्वनाथलाई विनाकसुर सात वर्ष जेलमा राख्दा परिवारले भोग्नु परेको आर्थिक, नैतिक र सामाजिक क्षर्तिको लागि उनीहरूको संघर्ष चल्नेछ ।